ShweMinThar: Cervical intraepithelial neoplasia (CIN) သားအိမ်ဝ ရောဂါတမျိုး
ကျွန်တော်၏ အမျိုးသမီး (၃၉ နှစ်) သည် ပြီးခဲ့သော September လဆန်းပိုင်းက၊ မြန်မာပြည်တွင် Ultrasound, Biopsy, CT scan, Pep smear Test ပြုလုပ်ခဲ့ရာ သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ (CIN 1, HPV Infection) ဟု အဖြေထွက်ခဲ့ပါသည်။ ဘန်ကောက်မြို့N-Health ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့ ပြီး Thin Prep Test စစ်ဆေးရာတွင်လည်း Negative for Intraepithelial Lesion or Malignancy. Mild inflammation. Reactive epithelial cellular changes. Partially obscuring blood ဟု အဖြေထွက်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာပြည်တွင် ပြသလျှက်ရှိသော OG မှ မြန်မာအခေါ် မီးရှို့လျှင် ပျောက်ကင်းနိုင်ကြောင်း ပြောပါသည်။ အဖြေကို ပိုမိုသေချာစေရန့့် ရှိ OG နှင့် ထပ်မံသွားရောက် ပြသရာတွင် စိုးရိမ်စရာ မလိုကြောင်း နောက် လေးလ ကြာမှ နောက်ထပ် စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန် လိုကြောင်းသာ ပြောပါသည်။ မီးရှို့ ကုသခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ အကျိူးအပြစ်များကို ရှင်းလင်းစွာ သိရှိလိုပါသည်။ မြန်မာပြည်မှ OG အများစုသည် ယခုအခြေအနေ (CIN 1) သည် မီးရှို့ကုသခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်း နိုင်သည် ဟု ပြောဆိုကြပါသည်။့့ ရှိ OG အား သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် ပြောကြည့်ရာ တစ်လင် တစ်မယား နေပါက ထိုးရန်မလိုဟုသာ တွင်တွင်ပြောပါသည်။
ထို့ကြောင့် မြန်မာပြည်နှင့် ကွာခြားသောအချက်ကို တွေ့ ရှိရပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် မည်သူ့ကိုမဆို တိုက်တွန်းပါသည်။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး ထိုးခြင်း၏ အကျိူးအပြစ်များကို ရှင်းလင်းစွာ သိလိုပါသည်။ ရောဂါကူးစက်နိုင်သော အကြောင်းအရင်းများ အားလုံးကိုလည်း သိလိုပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် သစ္စာရှိသော အိမ်ထောင်သည်များဖြစ်ကြပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် CIN 1, HPV Infection ဖြစ်ရပါသလဲ။ တစ်ခုပြောစရာရှိသည်မှာ ကျွန်တော်၏ အမျိုးသမီးသည် ၃ ကြိမ် သားလျှောခဲ့သဖြင့် အပြင်ဆေးခန်းတွင် ၂ ကြိမ် နှင့် ဗဟိုအမျိုးသမီး ဆေးရုံကြီးတွင် ၁ ကြိမ် D&C လုပ်ခဲ့ဖူးပါသည်။
Mild dysplasia (LSIL or CIN I) သာမန်အဆင့်တွေကို ၃-၆ လကြာရင် ထပ်စစ်ဘို့ သင့်တယ်။
မပျောက်သေးတာ တွေ့လာရင် ဆေးကုဘို့ လိုမယ်။ Higher grade CIN အဆင့်ကို Removal or destruction of the neoplastic cervical cells ကင်ဆာ (ကလပ်စည်း) တွေကို ဖျက်ဆီး ထုတ်ပြစ်နည်းတွေ လုပ်ရမယ်။
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ - Cervical intraepithelial neoplasia (CIN) သားအိမ်ဝ ရောဂါတမျိုး